Shwe G | May 6, 2021
အမရပူ ရမြို့ရှိ မဟာ ဂန္ဓာရုံကျောင်းတို က်သို့ သွားရာလမ်းဘေး တစ်နေရာတွင် နာ မည်ကြီးသည့် အကြော်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ရှိသည်။ ထိုအြေ ကာ်ဆိုင်လေးသည် နံနက်လင်းပြီဆိုသည်နှင့် အကြော်ဝယ် လာသူအပေါင်းဖြင့် အုံခဲကာစည်ကားနေလေ့ရှိသည်။ ဘုန်းကြီးဆွ မ်းလောင်းရန်ဖြစ်စေ၊ နံနက်ခင်းအ ဆာပြေစားသုံး ရန်ဖြစ်စေ လာဝယ်ကြသူများ ရှိသကဲ့သို့ အမရ ပူရမြို့လေး ရှိ နံနက်ခင်းဖွင့်
Shwe G | April 22, 2021
ဒီနေ့ စက် ရုံကို ကိုရီယား ရဲနှစ်ယောက် လာတယ် မြန်မာလူမျိုးနဲ့တွေ့ချင်လို့တဲ့ ရင်ထဲထင့်သွားတယ်။ ငါဘာမှမလု ပ်ခဲ့ပါဘူးပေါ့ စက်ရုံမှုးက ပြလိုက်တော့ ကိုယ့်ဆီလာပြီ စက်ခဏရပ်ပြီး စကားပြောချင်တယ်တဲ့ ၊သူတို့ဆီသွားတော့ နာမည်နဲ့အသက်မေးတယ် ပြီးတော့ ကဒ်လေးထုတ်ပေးတယ် ရဲစခန်းဖုန်းနံပါတ် ၊သူကမေးတယ် ဒီမှာမင်းအ ဆင်ပြေရဲ့လားတဲ့ မင်းမိသားစုနဲ့အဆ က်သွယ် ရလားတဲ့ ၊မြန်မာနိုင်ငံကြော င်းသူတို့သိတယ်တဲ့
Shwe G | March 4, 2021
ဘစိုင်းဟာ တော်တော်လေး ပြန်ရုန်းရမယ်။ သက်သက်ခိုင်က ထိုင်နေအကောင်း ထမှကျိုးမှန်းသိဆိုသလို သူ့ဟာသူမဲရှုံးတာ ပြသနာမဟုတ်သေးဘူး ခုတော့ သူ့စီးပွားရေး လုံးဝ ပြိုလဲသွားလိမ့်မယ် ကျော်ကျော်နန္ဒတယောက် အရင်လို တလွဲတွေလုက်တဲ့အခါ ဆဲချင်ရင်တောင် ငါတို့ မျက်နှာနာစရာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ။ ငြိမ်းမြတ်သူ Miss ထပ်ရွေးရင် ဆဲတာလျှော့ပြီး လျစ်လျူရှုရတော့မယ် မျက်နှာနာရမယ်လေ CDM သူရဲကောင်းတွေ ရုံးပြန်တက်တဲ့အခါ
ဖတ်နေရင်း မျက်ရည် ပေါက်ပေါက်ကျမိ ပြီ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်..
Shwe G | February 28, 2021
ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့တာမို့ မှတ်တမ်းတင်ပါရစေ ! ဒီနေ့လှည်းတန်းကနေ ပြေးလာတဲ့ကလေးတွေ သံလမ်းဘက်အထိ တဖြည်းဖြည်းချင်း ဆုတ်ပြေးလာရတာပါတဲ့ ” “မင်းတို့ မိဘတွေစိတ်ပူနေမယ် ဖုန်းဆက်လိုက်အုံး”လို့ ဟင့်အင်းမလိုဘူး ဦးလေး သားတို့မိဘတွေက တခါတည်းမှာပြီးလွှတ် လိုက္တာပါ ! အမေတို့ခေတ်ကနေ အခုထက်ထိ နှစ်ပေါင်း ၆၀ လောက် မရဖူးတဲ့ ဒီမိုကရေစီ သားတို့အရယူပေးရမယ် ! ငါ့သားတွေ
တိုက်ခိုက်လာသူတွေကို ပြန်လည်တွန်းလှန်ဖို့ Self defense tip နည်းန ည်းပေး ပါ့မယ်။ ဒီနည်းတွေ သုံးဖို့ အားကောင်းဖို့မလိုပါဘူး။ 1. လက်သီးနဲ့ မေးစေ့/ပါးကို မထိုးပါနဲ့။ လက်သီး မဆုပ်တတ်ရင် လက်ကျိုး တတ်ပါတယ်။ လက်ချောင်းကြားထဲ သော့ထည့်ဆုပ်တာ မျိုးလည်း မလုပ်သင့်ပါဘူး။ 2. လက်ထဲက တခုခုကို ကိုင်မယ် ထုမယ်ဆို
Shwe G | February 23, 2021
အလွန်စိတ် ဝင်စားလေး စားဖွယ်ကော င်းတဲ့ ဒီသူရဲကောင်းလူ ငယ်ရဲ့ဘဝဖြတ် သန်းမှုနဲ့သူရဲ့လုပ်ဆောင် ချက်တစ်စွ န်းတစ်စ ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်……. ဒေါက်တာ ဆာဆာဖြစ်မည့် တစ်နှစ်မှ တစ်ခါသာ ရေချိုးဖူးတဲ့ လိုင်းလင်းပီရွာက ကလေးေ လးကိုလည်း ဒေါက်တာဖြစ်မည်လို့ သူ့အဖေက ပြောတုန်းက ရွာကလူတွေက သူ့ကို အရူးလို့ ထင်ပြီး ဝိုင်းကြည့်ဖူးတယ်။ ရုပ်ဝတ္ထုတွေကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်လို့
ဆိုရှယ် မီဒီယာေ တွသုံးပြီး အွန်လိုင်းေ ပါ်မှာ နေ့စဉ်ပြောဆိုနေကြတဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာ လုံခြုံမှု ရှိပါသလား။ သင်ပြောခဲ့တဲ့ လူသိမခံချင်တဲ့ သင့်အကြော င်းတွေကို တိတ်တဆိ တ်သိနိုင်တဲ့သူတွေ ရှိနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ တဦးနဲ့တဦး စကားပြောကြတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး (Private) ဖြစ်ပါတယ်။ ခံစားမှုတွေ၊ မိသားစုအရေးေ တွဆီကနေ နောက်ဆုံး စီးပွားရေး၊